Author: Gardami Melabar
Wassiirka la magacaabay haddii uu xubin ka yahay labada Aqal midkood ama uu hayo xil guud ama mid gaara ah, waa in uu iska somwlia kursigiisa 90 casho gudahood kadib markii loo dhaariyo xafiiska 2 Madaxweynuhu marka uu dhisayo Golaha Wasiirrada waa in uu tixgeliyaa qaybaha ay ka kooban tahay bulshada Soomaaliyeed.
Haddii la qaato nidaamka madaxweynennimada nambarada qodobbada hoose way is badalayaan.
Inta uusan hawsha bilaabin Madaxweynaha Jamahuuriyaddu wuxuu marayaa dhaarta ku xusan sharciga, waxaana lagu hor dhaarinayaa xaflad ka dhacaysa fagaare dadweynuhu joogaanwaxaana dhaarinaya Guddoomiyaha Maxkamaada Dastuuriga. Cutubka 12aad Heerarka kala Duwan ee Shaqaalaha dowladda ee Rayidka. Golaha Wasiirrada marka ay helaan kalsoonida Golaha Shacbiga waxay marayaan dhaarta ku xusan sharciga, waxaana ku hor dhaarinaya fadhi gaar ah ee Golaha Shacbiga Gudoomiyaha Maxkamada Csub.
Macnaha erayga Rastafari Ras iyo Tafari.
By your continued use of this site you accept such use. Shuruudaha u Doorashada Madaxweynennimada waa in uu yahay: Gaashaanka dushiisa waxaa ku yaal rurkumo carbeed oo xardhan, lehna shan madax oo dahabi ah oo labada geesba ku yaalliin ay kala qaaran yihiin.
Dastuurka Soomaaliya wuxuu dhiirrigelinayaa xuquuqda aadanaha, talinta sharciga, shuruudaha guud ee xeerka caalamiga ah, cadaaladda, xukuumad loo dhan yahah csub ku dhisan wadatashi, kal-soocidda awoodaha sharcidejinta, fulinta iyo garsoor madaxbanaan oo leh hannaan ku dhisan la-xisaabtan iyo hufnaan oo ka jawaabaya danaha dadweynaha.
Islaamku waa Diinta Dowladda. Maqaamkma Magaalo madaxdu ay ku leedahay qaabdhismeedka federaalka ee Jamhuuriyadda wuxuu ku xusan yahay Cutubka 7-aad ee Dastuurka. Dastuurkan KMG ah ee ka waxaa uu ka duwan yahay dastuuradii hore marka laga hadlayo shuruudaha doorashada Madaxweynaha dalka oo waxaa ku qoran qodobkiisa 88aad: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa madaxa Qaranka iyo xukuumadda, waana astaanta midnimada Qaranka.
Marka uma jeedo waxa dadkeenu ay kitaabo kale u doonayaan. Qodobka 97aad-Soo Magacaabida Musharraxa. Cutubka 16aad – Qodobbada Guud.
Qabyo-Qoraalka Dastuurka Cusub ee Soomaaliya. Madaxweyne ku-xigeenka haddii uu geeriyoodo, iscasilo ama xilka laga qaado A fhayeenka Golaha Shacbiga ayaa la wareegaya xilkiisa. Legalizing Stolen Fish December 28, Man to watch in December 27, Cutubka 16aad – Qodobbada Guud. Cutubka 13aad – Hay’adaha Dowlad-Goboleedyada. Wassiirka la magacaabay haddii uu xubin ka yahay labada Aqal midkood ama uu hayo xil guud ama mid gaara dastuufka, waa in uu iska casilaa kursigiisa 90 casho gudahood kadib markii loo dhaariyo xafiiska.
Qodobka 2aad — Dowladda iyo Diinta 1. Qodoboka 7aad Dasuturka Dowladda 1.
Maxamed Nur Gacal oo cusun tirsan aqoonyahanka dalka waxaa uu qabaa in madaxweyne labo dhalasho leh uu khatartiisa leeyahay, isagoo intaa raaciyay in aanay dunida inteeda kale ka jirin, waxaa uu ku taliyay in wax laga bedelo shuruudaha qofka u sharaxan madaxweynaha ee ku qoran dastuurkan qabyo qoraalka ku jira.
Cutubka 5aad Dhul, Hanti iyo Degaan.
Qodobka aad-Habka Iscasilaadda Madaxweynaha. Dalka Afgaanistaan waxaa shardi looga dhigayey qofka madaxweynaha in uu muslim ahaado, in aanu heysan dhalasho kale iyo wixii la mid ah.
Guddiga ku meel gaarka ee doorashada ayaa sheegaya in uu diiwaangeliyey in ka badan 12 milyan dastuurla qof iyadoo codka laga dhiiban doono in ka badan 27 kun oo goobood. Cutubka 4aad Waajibaadka Jamhuuriga ah. Cutubka 15aad Sugidda Nabadda iyo Ammaanka Qaranka. Qodobka 8aad — Magaalo Madaxda Qaranka 1. Gobannimada Jamhuuriyadda soomaaliya waxay koobeysaa dhulka Jamhuuriyadda oo idil, oo ay ku jiraan berriga, jasiiradaha, biyaha goboleed, ururkooda, hawadooda iyo geyi-qaaradeedka.
Alberta high school student discovers new diamond extraction method December 28, Haddi kale waqtigaas waxaa loo tixgelinayaa in uusan aheyn muddo xileed marka la fiiriyo u jeedooyinka qodobka ee muddo xileedka Madaxweynaha.
Berito oo arbaca ah, taariikhduna tahay afarta bisha Agoosto, Dalka Kenya waxaa looga dareeri doono afti loo qaadayo dastuur cusub, oo ay ku kala qeybsameen siyaasiyiinta iyo hoggaamiyaasha madhabta masiixiga ee diinta masiixiga. Waxaa loo dooran karaa somalis Madaweynaha JDS. Sharci gaar ah ayaa laga soo saarayaa billadaha sharafta. Qodobka aad-Xilka Madaxweyne Ku-xigeenka.
August 6, 2019 August 6, 2019 Leave a Comment on DASTUURKA CUSUB EE SOMALIA PDF